कोरोना महामारीमा आयुर्वेद औषधिका लागि नरदेवीमा भिड (भिडियो रिपोर्ट)
भिडियो/तस्बिर : विनोद विष्ट
२०७७ असोज १५ बिहीबार ०८:४५:००
विगत २३ वर्षमा उत्पादन गरेबराबर औषधि पछिल्लो एक महिनामै उत्पादन
काठमाडौंको नरदेवीस्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय । विगतमा प्रायः सुनसान रहने यो चिकित्सालयमा पछिल्लो समय भने मान्छेको भिड लाग्न थालेको छ । नरदेवीमा बाक्लो चहलपहल कोरोनाले ल्याइदिएको हो।
विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारी नेपाल भित्रिएको पनि नाै महिना भएको छ । १४ असोज बुधबारसम्म देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या ७७ हजार आठ सय १७ पुगेको छ । यीमध्ये चार सय ९८ को मृत्यु भएको छ ।
विश्वले हालसम्म कोरोनाको औषधि अर्थात् खोप पत्ता लगाउन सकेको छैन । यो अवस्थामा कोरोनाबाट बच्न शरीरको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता अर्थात् इम्युनिटी पावर बढाउनु नै एक मात्र विकल्प रहेको स्वास्थ्य विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।
यसका लागि जडीबुटीबाट बनेका आयुर्वेदिक औषधि सेवनमा जोड दिन थालेका छन् । र, नेपालको एक मात्र केन्द्रीय आयुर्वेद चिकित्सालयमा पनि रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाउने औषधि लिन मान्छेको भिड लाग्न थालेको छ ।
कोभिड– १९ को औषधि पत्ता नलागेका कारण रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने औषधि लिन आएको बताउँछन् देव मानन्धर । ‘विश्वमै यसको औषधि छैन,’ उनी भन्छन्, ‘आफ्नो रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाऔंँ भनेर आयुर्वेदिक औषधि लिन आएको हुँ ।’
नरदेवीकै आयुर्वेदिक औषधिले कोरोनालाई जितेको अनुभव सुनाउँछन् क्षेत्रपाटीका कञ्चनप्रकाश पाण्डे । पाँच दिनअघि मात्रै पाेजेटिभ रिपोर्ट आएका पाण्डे थप औषधि लिन नरदेवी आएका थिए । उनले भने, ‘परिवारमा कोरोना संक्रमण देखियो, हामीले त्यसलगत्तै जडीबुटीबाट बनेको रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाउने औषधि सेवन गऱ्याैँ । यसले १४ दिनमा नेगेटिभ रिपोर्ट आयो ।’
काठमाडौंका शैलेन्द्र श्रेष्ठ पनि कोरोनाविरुद्ध लड्न रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाउने चूर्ण लिन नरदेवी पुगेका थिए । उनले कोरोनाबाट बच्ने आत्मविश्वासका साथ रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने औषधि नियमित सेवन गर्न थालेको बताए ।
चिकित्सालयले कोरोना भाइरसको संक्रमण वा रोगबाट स्वस्थ राख्न रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धिका लागि विभिन्न १२ जडीबुटी मिश्रित तीन प्रकारका औषधि उत्पादन गरेर वितरण गरिरहेको छ ।
चिकित्सालयले २५ सयभन्दा बढी कोरोना संक्रमितलाई यो औषधि वितरण गरिसकेको छ । नरदेवीले उपलब्ध गराएको औषधि सेवन गर्नेहरू औसत सात दिनमा डिस्चार्ज भएका छन् ।
विभिन्न जडीबुटीबाट बनाइएका जेष्ठवासादि, गुडुची र यष्ठिमधु मिश्रित चूर्ण तयार गरी बिरामीलाई दिने गरेको चिकित्सालयका निर्देशक डा. प्रदीप केसीले बताए । चिकित्सालयले मौसमी रुघाखोकीका बिरामीलाई लक्षित गरी वर्षौंदेखि उत्पादन गरिँदै आएका चूर्ण हाल कोरोनाका बिरामीलाई निःशुल्क वितरण गर्दै आएको छ ।
जेष्ठवासादि, गुडुची र यष्ठिमधुको मिश्रणलाई निश्चित विधि र मात्रा मिलाएर कोरोना संक्रमित र अन्य बिरामीलाई रोगप्रतिरोधी क्षमता विकास गर्न निःशुल्क वितरण गरिएको छ । कोरोना महामारी बढ्दै गर्दा यो चूर्णको माग ह्वात्तै बढेको डा. केसीले बताए ।
‘कोरोना संक्रमितमा देखिने लक्षण र समस्या समाधान गर्न यो औषधि सेवन गर्नु फाइदाजनक छ भन्ने विश्वासका आधारमा वितरण अगाडि बढाएका हौँ,’ उनले भने, ‘यो औषधिको सय वर्षको इतिहास छ ।’
नरदेवी चिकित्सालयले जेष्ठवासादि, गुडुची र यष्ठिमधु मिश्रित चूर्ण वर्षमा एकपटक सय किलो मात्र उत्पादन गर्दै आएको थियो । तर, यो परिमाणमा विगतका २३ वर्षमा गरेबराबर उत्पादन पछिल्लो एक महिनामै गरेको छ । अर्थात् ११ भदौदेखि अहिलेसम्म २३ सय किलो चूर्ण तयार गरेको छ ।
नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयको इतिहासमै यस्तो कहिल्यै नभएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । उत्पादन भएकोमध्ये २१ सय किलो बिरामी र अन्य सर्वसाधारणलाई वितरण गरिएको छ ।
नरदेवी चिकित्सालयले सुक्खा खोकी र हल्का ज्वारो आउने समस्या भएकाका लागि पित्तपापडा र नागकेशरको मिश्रणमा आमपाचक औषधि तयार गरेको छ । असुरो र तालिसपत्रको सम्मिश्रणमा तयार पारेको औषधिले श्वास फेर्न गाह्रो भएकाहरूलाई सहज गराउँछ । यसले पाचन प्रणालीमा आउने समस्यासमेत समाधान गर्छ ।
आयुर्वेदले पाचन प्रणाली नै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको मुख्य केन्द्र भएको पुष्टि गरिसकेको छ । त्यसैले सोही ठाउँबाट नै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास हुन्छ भन्ने विश्वासका आधारमा सुकमेल, ल्वाङ र दहिकाम्लोको मात्रा समावेश गरेर चिकित्सालयले औषधि उत्पादन गरेको चिकित्सक बताउँछन् ।
विगतका दिनमा औसत ५० जना बिरामी पुग्ने नरदेवीमा हिजोआज ६ सयको संख्यामा जाने गरेका छन् । उनीहरूलाई औषधि उपलब्ध गराउन चिकित्सालयलाई अहिले भ्याइनभ्याई छ ।
भिड व्यवस्थापन गर्न र औषधि उत्पादन गर्न चिकित्सालयलाई हम्मेहम्मे परेको छ । चिकित्सालयका अनुसार यहाँबाट एक महिनामा मात्रै १३ हजारले सेवा लिएका छन् ।
पछिल्लो समय चिकित्सालय आउनेमध्ये ९० प्रतिशत सेवाग्राही कोरोनाका लागि वितरण गरिएको औषधि नै लिन आउनेमध्येका छन् ।
आयुर्वेदिक औषधिमा मान्छे झुम्मिएको देख्दा चिकित्सालयका चिकित्सक तथा कर्मचारी चकित परेका छन् । २८ वर्षदेखि नरदेवीमा सेवा गर्दै आएका कविराज कृष्ण श्रेष्ठले अहिलेजस्तो भिड कहिल्यै देखेका थिएनन् ।
‘यो आयुर्वेदका लागि कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय भएको छ,’ उनले भने, ‘विगतमा कामै नपाउने यहाँका कर्मचारी हाल रातभर खटेर बिरामीको सेवामा लाग्नुपरेको छ । शनिबारसमेत हामी काममा व्यस्त हुन्छौँ ।’ नरदेवी चिकित्सालयमा एक सय १९ जना कर्मचारी छन् ।
विगतमा वर्षको एकपटक औषधि उत्पादन गर्ने नरदेवी चिकित्सालयले अहिले हप्तामै चारपटक औषधि बनाउँछ । त्यही पनि बिरामीको माग धान्न सकेको छैन । दैनिक बिरामीको चाप बढ्दै गएकाले औषधि उत्पादन बढाउन चिकित्सालयले पहिलोपटक टेन्डर खोल्न लागेको छ । तर, सरकारले बजेट व्यवस्था नगरे उत्पादन बन्द हुने निर्देशक केसी बताउँछन् ।
‘औषधि उत्पादनमा एक महिनामा १७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । बजेट अभावले गर्दा आवश्यकताअनुसार औषधि उत्पादन गर्न सकिएको छैन,’ डा. केसी भन्छन्, ‘एक केजी औषधि बनाउन एक हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । तर, सरकारले बजेट दिएन भने केही समयपछि बन्द हुन्छ ।’
#नरदेवी # आयुर्वेद औषधि
नरदेवीको इतिहासमा पहिलोपटक शनिबार ओपिडी सेवा
सेवाग्राहीको भिड बढेपछि नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयको ओपिडी शनिबार पनि खुला
नरदेवी आयुर्वेद अस्पतालद्वारा २१ प्रकारकाे आयुर्वेदिक औषधि निःशुल्क वितरण